So wopɛ sɛ woyɛ nhwehwɛmu bi na wunya Bible mu nimdeɛ pii? So wopɛ sɛ wunya kyerɛwsɛm anaa onipa bi, beae, anaa ade pɔtee bi a wɔaka ho asɛm wɔ Bible mu ho nsɛm pii? Anaa aba w’adwenem da sɛ Onyankopɔn Asɛm no betumi aboa wo ma woanya wo haw bi ano aduru? Sɛ ɛte saa a, wubetumi akɔyɛ nhwehwɛmu wɔ nhomakorabea a ɛwɔ Ahenni Asa so no.
Yenya nneɛma a ɛboa ma yɛyɛ nhwehwɛmu wɔ hɔ. Ebetumi aba sɛ wunni Bible ho nhoma ahorow a ɛwɔ wo kasa mu a Yehowa Adansefo atintim no nyinaa bi. Nanso, nhoma a wɔatintim no nnansa yi no mu dodow no ara bi wɔ nhomakorabea a ɛwɔ Ahenni Asa so no. Ebia wubenya Bible nkyerɛase ahorow, nsɛm asekyerɛ nhoma a edi mũ, ne nneɛma foforo a yɛde yɛ nhwehwɛmu wɔ hɔ. Wubetumi akɔyɛ nhwehwɛmu wɔ nhomakorabea hɔ bere a asafo nhyiam nnya mfii ase ne bere a yɛapɔn. Sɛ kɔmputa wɔ hɔ a, wubetumi anya Watchtower Library wɔ so. Eyi yɛ kɔmputa dwumadi a yɛn nhoma ahorow pii wɔ so, na ɔfã bi wɔ hɔ a ɛma nhwehwɛmu yɛ mmerɛw a wubetumi de ahwehwɛ asɛm bi, asɛmfua, anaa kyerɛwsɛm bi.
Ɛboa wɔn a wɔyɛ Teokrase Ɔsom Sukuu dwumadi no. Sɛ wo din wɔ sukuu no mu a, nhomakorabea a ɛwɔ Ahenni Asa so no betumi aboa wo yiye bere a woresiesie wo dwumadi no. Sukuu sohwɛfo no na ɔhwɛ nhomakorabea no so. Ɔno na ɔhwɛ ma wɔde nhoma a aba foforo no bi gu hɔ na ɔhwɛ ma wɔhyehyɛ no kama. Ɔno anaa nea ɔne wo sua Bible no betumi akyerɛ wo sɛnea wubetumi anya nsɛm a wuhia no. Nanso, ɛnsɛ sɛ wofa nhoma biara fi nhomakorabea a ɛwɔ Ahenni Asa so no. Nokwasɛm ne sɛ, ɛsɛ sɛ yɛhwɛ nhoma ahorow no yiye, na ɛnsɛ sɛ yɛkyerɛkyerɛw mu.
Bible ka sɛ, sɛ yebenya “Onyankopɔn ho nimdeɛ” a, ɛsɛ sɛ yefi yɛn pɛ mu hwehwɛ nimdeɛ te “sɛ akorade a ahintaw.” (Mmebusɛm 2:1-5) Nhomakorabea a ɛwɔ Ahenni Asa so no betumi aboa wo ma woafi ase ahwehwɛ nimdeɛ.
Nneɛma a yɛde yɛ nhwehwɛmu bɛn na ɛwɔ nhomakorabea a ɛwɔ Ahenni Asa so?
Henanom na wobetumi aboa wo ma wode nhomakorabea no adi dwuma yiye?
Sɛ wopɛ sɛ wufi ase hyehyɛ w’ankasa nhomakorabea a, kɔ baabi a wogye nhoma no kɔhwɛ nhoma a wubetumi anya bi wɔ hɔ. Nea ɔne wo sua Bible no betumi akyerɛ wo nhoma ahorow a wubetumi agye de afi ase.
Wobɛyɛ Dɛn Atumi Anya Nhomakorabea a Ɛwɔ Ahenni Asa so no so Mfaso?